भोजपुरका ८१ मध्ये ४९ वटा वडाको मतगणना सम्पन्न, कुन पार्टीले कति जित्यो ? — KhabarTweet::Nepali online news portal भोजपुरका ८१ मध्ये ४९ वटा वडाको मतगणना सम्पन्न, कुन पार्टीले कति जित्यो ? — KhabarTweet
भोजपुरका ८१ मध्ये ४९ वटा वडाको मतगणना सम्पन्न, कुन पार्टीले कति जित्यो ?
भोजपुर- भोजपुरमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत यतिबेला मतगणना धमाधम भइरहेको छ भने परिणामहरु सार्वजनिक हुने क्रम शुरु भएको छ ।
नौ वटा पालिका रहेको भोजपुरमा ८१ वडा रहेका छन् । जसमध्ये ४९ वटा वडाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको छ ।सार्वजनिक भएको परिणाम अनुसार एमाले र कांग्रेसले बराबरी १७ वटा वडा जितेका छन् । माओवादीले १४ वडा जितेको छ
निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको नतिजा अनुसार एमालेले हतुवागढी गाउँपालिकाको १, २,३, ४ र ९ नम्बर वडा जितेको छ ।
त्यस्तै अरुण गाउँपालिका १, पौवादुङमा गाउँपालिकाको वडा नं १, साल्पा सिलिछो २, आमचोक ३ र ४ टेम्के मैयुङ ८ र १ षडानन्द नगरपालिकाको १,७ र १४ नम्बर वडा जितेको छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले साल्पा सिलिछो १,३,४ र ५ आमचोक १ र २ पौवादुङमा २, भोजपुर नगरपालिकाको २,३,४ र ५ अरुण गाउँपालिकाको ३ र ५, षडानन्द नगरपालिकाको ८ र १३ नम्बर वडा जितेको हो ।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले भोजपुर नगरपालिका १ , टेम्केमैयुङ ९, आमचोक ५,६,७,८,९ र १०, रामप्रसादराई गाउँपालिका १ र ३, पौवादुङमा ३ र ४ अरुण गाउँपालिकाको २ र ४ नम्बर वडा जितेको छ ।
त्यस्तै रामप्रसादराई गाउँपालिकाको वडा नं २ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारले वडाध्यक्ष जितेका छन् । अब ३२ वटा वडाको मत परिणाम आउन बाँकी छ ।